Iindaba - Ngaba iibheringi ezingenayo ioyile Ngokwenyani azifuni ioyile yokuthambisa?
Iibheringi ezingenayo i-oyile ziluhlobo olutsha lweebheringi ezifakwe i-lubricated, ezinempawu zeebheringi zentsimbi kunye neebheringi ezingenazoyile. Ifakwe matrix yesinyithi kwaye ithambise ngezinto ezizodwa eziqinileyo zokuthambisa.
Inempawu zokuthwala okuphezulu, ukumelana nefuthe, ukumelana nobushushu obuphezulu kunye nokukwazi ukuzithambisa. Ilungele ngakumbi izihlandlo apho kunzima ukuthambisa kunye nokwenza ifilimu yeoyile, njengomthwalo onzima, isantya esisezantsi, ukubuyisela kwakhona okanye ukujija, kwaye akoyiki ukubola kwamanzi kunye nokunye ukubola kweasidi.
Luphawu ezisetyenziswa metallurgical koomatshini eyahlulayo ngokuqhubekayo, izixhobo lothuli zentsimbi, oomatshini kwemigodi, iinqanawa, iiturbines umphunga, iinjini ngamanzi, oomatshini ziphene yokubumba kunye nezixhobo zemveliso imigca.
Ukuthwala i-oyile-engenanto kuthetha ukuba ukuthwala kunokusebenza ngokwesiqhelo ngaphandle kweoyile okanye ioyile encinci, kunokuba kungabikho oyile ngokupheleleyo.
Izinto eziluncedo zeebheringi ezingenazoyile
Ukwenzela ukunciphisa ukungqubana kwangaphakathi kunye nokunxiba iibheringi ezininzi kunye nokuthintela ukutshisa kunye nokuncamathela, ioyile yokuthambisa kufuneka yongezwe ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo nokuthembekileyo kweebheringi ukwandisa ubomi bokudinwa kweebheringi;
Ukuphelisa ungcoliseko lokusingqongileyo olubangelwa kukuvuza;
Ukulungele umthwalo onzima, isantya esisezantsi, ukuphindaphinda okanye ukuguqula amaxesha apho kunzima ukuthambisa kunye nokwenza ifilimu yeoyile;
Ayoyiki ukubola kwamanzi kunye nokunye ukubola kweasidi;
Iibheringi ezifakwe ngaphakathi azigcini kuphela ukonga ipetroli namandla, kodwa zikwanobomi obude benkonzo kuneebheleji ezihamba ngokutyibilika.
Amanyathelo okhuseleko ekufakeleni i-oyile engenazithuthi
Ukufakwa kwe-oyile ngaphandle kweoyile kuyafana nezinye iibheringi, ezinye iinkcukacha kufuneka ziqwalaselwe:
(1) Chonga ukuba ngaba kukho iqhubu, izithambiso, njl.njl.
(2) Nokuba kukho uthuli okanye isanti phezu kwendawo yokuhlala.
(3) Nangona kukho ukukrwela okuncinci, ukukhupha, njl., Kufuneka zisuswe ngelitye leoyile okanye iphepha lesandpaper.
(4) Ukuthintela ukungqubana xa kulayishwa, kuya kudityaniswa intwana yeoyile yokuthambisa kumphezulu we-shaft kunye ne-shaft shell.
(5) Ubunzima bokuthwala i-oyile ngaphandle kobushushu abuyi kuba ngaphezulu kweedigri ezili-100.
(6) Ukugcina kunye nokutywina ipleyiti yokungabinayo ioyile akunakunyanzelwa.